Focus on Oromia: Xalayaa Bidiruu Irraa
Xalayaa Bidiruu Irraa
Ulaa Gullallee 224
Obboleessa koo Raagaa,
Hunda dursee nagaa obbolumaan siif dhiheessa. Attam nagaa fayyaa keetii, ani galata Waaqaayyoo fayaa kooti. Xalayaa siif hin barreessin turuu koof dhiifama. Xalayaa barreessu dhabee osoo hin taanee, mana poostaa irrraa fagoon jiraafan yeroon siif erguu dhabe. Eegan as dhufe harra reefin magaalaa Beddelleetti as bahuu kooti. Kanaafan yoona ga’e. Akka argatteen naa deebisi.
Beddeellee biyya ajaaibaati. Finfinee yeroo waliin turre sana deemumoo dhiisu jedhee mamaa akkan ture ni yaadatta. Garaa jabaadhee as dhufuu kootti harra hedduun gammada. Guyya sana garuu, keessahuu, Finfinnee ka’ee laga Gibee hangan ga’utti jibbeen tue. Karaan caccabaa waan ta’eef konkolataan hedduu nu raasa ture. Baayyee bulluqas. Foddaa yoo bante awaaratu ija sitti jaamsa. Laga Gibee yeroo geenyu garuu oo’ii fi hawwaarri lab jedhe. Karaan bitaa fi mirgaa magariisa bunaa, muusa, burtukaanaa fi biqiltuu biroon bareedina uffatee nu simannaaf kan qixaa’e natti fakkate. Magaalaan Jimmaa bareedina magaariisa kana fakkatuun nu simatte. Dhaabbata konkolaataa Jimmatti buufannee laaqana nyaanne deemsa itti fufne, gara Beddelleetti. Aggarroo keessa baatee gara Beddelle yeroo deemtu magariisni buna bosonaan wal simatee naannoo daraan bareeche argita. Beddeellee biyya kana fakkaattu keessan taree fagoo deemnee Araddaa Bidiruu geenye. Akka hin dogoggorre: Araddan Bidiru Bedellee daangessa malee godina Beddellee miti. Bunnii bosonaan wal-simate kan Bedelle yoo caale malee hin hanqatu.
Waa’ee magaalaa Araddaa Bidiruu xalayaa itti aanuuf dhiiseen waa’ee bunaa tokko lama irraa siif jedha. Hirriyoonni keenya, anaa fi si dabalatee, buna dhuguu irra darbinee biqiltuun bunaa maal akka fakkaatuu fi akkamitis akka hoomishamu waan beeknu hin qabnu ture. Suuraa buna daraaraa xalayaa kana waliin siif ergee ilaal. As galee bariinanin buna bu’uu jalqabe. Itti baruu wallaleen jibbeen ture jalqaba. Amma garuu hunduu salphaa dha, qorattii irraa sirritti of-eegutu na rakkisa malee. Harra torban lamaffaa jalqabuu kooti. Kan si dhibu, Dilbata harraa kanan guyyaa jalqabaa bu’e sana gabaatti geessee gurguradheen yeroo jalqabaaaf bu’aa dafqa koo argadhe. Qarshii 1248-ttin gurguradhe. Yoon torban shan, hanga manni barumsaa banamutti, asi ture akkasumas gatiin bunaa akka kanatti yoo itti fufe, egaa maallaqa waa harkatti qabadheen gara Finfinneetti ol deebi’a jedheen yaada. Baayyee si hin dhibuu?
Raaguu! Kanan olitti jedhe hunduu akkasitti utuu jiruu jireenya Araddaa Bidiru kana waa tokkoofan jibbe: korreentiin hin jiru. Alli dafee waan dukanaa'uuf jecha namoonni akka lukkuu dafanii manatti ol galu. Roobus caamus dhiinaan hunduu oldacha'a. Akka Finfinnee galgala galagala "wookii" gochuun hin jiru. Kanaan maal jetta? Gama biroon, ani yeroo hundaa waa'ee keessanin yaada. Hangan jedhe sana eeguu koo rabbitu beeka. Dafee Finfinneetti ol deebi'uun koo hin hafu.
Hanga xalayaa itti aanutti, nagaa Waaqayoon
Posted by Alamu at 9:51 PM